UDomingo Villar. Isethulo eMadrid Sesikebhe Sokugcina. I-trilogy yakhe | Izincwadi Zamanje
UMariola Diaz-Cano Arevalo | | Abalobi, Imicimbi, Amabhuku, Inoveli emnyama, eziningana
Izithombe (c) Mariola DCA.
NgoMsombuluko odlule bengise- isethulo se Umkhumbi wokugcina, inoveli entsha yombhali UDomingo Villar, evela eVigo ezinze eMadrid. Ibibanjelwe IGalicia House enhlokodolobha futhi kwakukhona ngokuphelele ngokuphelele.
Kulula, kuthobekile futhi kweqiwe Ngenxa yokwamukelwa okuhle ngemuva kweminyaka eyishumi ilinde le ncwadi, uVillar usinikeze i- inkulumo ekhululekile nawo wonke umusa wakho. Ngakho-ke kuyahamba lokhu isihloko mayelana isenzo nakokukodwa kwe- ama-trilogies amahle kakhulu obugebengu engikufundile.
1 UGalicia, uDomingo, uLeo, uRafa kanye nami
2 Ukwethulwa kwesikebhe sokugcina eMadrid - Mashi 25 - Casa de Galicia
2.1 Inqubo yokudala
2.2 Izingqikithi, abalingiswa, izinto zokuzilibazisa zombhali
2.3 Iphuzu lokugcina
3.2 Ibhishi labacwile
3.3 Umkhumbi wokugcina
UGalicia, uDomingo, uLeo, uRafa kanye nami
Ngiya eholidini ukuze I-Bueu, ebhange eliseningizimu ye Isikebhe sasePontevedra, njalo ngoJuni iminyaka engaphezu kwengu-20. Y uwele iVigo kusuka kumaCangas ebona ibhuloho le URande eceleni kanye neziqhingi AmaCíes enye ingeyami eyodwa ye- injabulo enkulu unyaka wonke.
Empeleni lezo zinsuku eGalicia imvamisa zihlala zihamba phambili onyakeni. Ngenxa yesimo sezulu, ukudla, abantu nomculo ngokugqamile kwawo nezwe lihluke ngokuphelele emasimini ami omile futhi athambile. Ngakho-ke ngokuhamba kwesikhathi Yize ngazalelwa ushizi kaManchego, nami ngizwa sengathi ngingu-octopus ukuze feira.
Kungakho ngolunye usuku leyo ngxenye yenhliziyo yami yagxuma lapho, esitolo sezincwadi futhi ngibheka ngaphandle kokubheka noma yini ngokukhethekile, ngabona izincwadi ezimbalwa ezinamakhava amnyama namhlophe neziqu ezikhangayo. Ngicoshe eyodwa kwathi ekhasini langemuva ngafunda amagama afana nalawa IVigo noma iPanxón. Eyodwa Amehlo amanzi isisulu besivela eBueu, futhi ku Ibhishi labacwile umcimbi wenzeke ePanxón, ngakho-ke Angizange nginqikaze ukuzithatha.
Ngemuva kwalokho ngihlangane nabalingiswa: Umhloli Leo Caldas, ebekelwe, ebucayi, yamagama ambalwa, ezolile, ngempilo yomuntu othile ebambekile futhi ephawulwe ngobuhlobo noyise nokufa kukanina ngaphambi kwesikhathi. Unomsizi, URafael Estévez, waseZaragoza, Amasentimitha ayi-193 esandla esiqinile futhi esiqondile, sesikhuthazo esinzima esimngenise ezinkingeni ezingaphezu kweyodwa futhi samzuzela uhlobo ekudingisweni eGalicia ngebhonasi eyengeziwe: leyo yokubhekana nokungaqondakali okuyisaga kwesiGalician okuvame ukumxhumanisa.
Zangigcina ngokulambisa Ngathandana kakhulu noLeo Caldas futhi ngizosithanda leso silwane esinsundu sikaRafael Estévez kuze kube phakade, iphoyinti lokuphikisa eliphelele kula maphoyisa amabili njengawethu ahlukile. Manje sengidlile nesithathu futhi, kanti, vele, bebelokhu bekhula ngosayizi nakwabafundi.
Ukwethulwa kwe- Umkhumbi wokugcina eMadrid - Mashi 25 - Casa de Galicia
Lapho kwethulwa le noveli yesithathu, UDomingo Villar wayexoxa nentatheli uSusana Santaolalla cishe ihora. Kakhulu ngijabule futhi nginamahloni Ekuqaleni, uVillar wakhombisa umuzwa ophindwe kabili we ukungakholwa nokungaqiniseki kakhulu i ukwamukela sencwadi ngemuva kwesikhathi esiningi njengokuthi ngoba leso sikhathi besizomisela sona ukukhohlwa. Akukho okunye okuvela eqinisweni. Kwakungu- impumelelo ngokushesha ekugxekeni kuwo wonke amazinga nasekuthengiseni.
UVillar usitshele ngakho kungani kuthathiwe iminyaka eyishumi ukukhipha le ncwadi yesithathu, eyayinesihloko sokuqala Iziphambano zamatshe. Isigaxa somuntu siqu, i ukufa kukayise, kwamenza wacabanga kabusha ngalokhu ayekubhalile. Ngakho-ke wanquma ukuqala phansi. Ngoba njengoba thina ababhalayo sazi kahle, lapho ama-muses ethatha amaholide, azivimbe noma angakunaki, kufanele unikeze isikhathi. Futhi indaba ngayinye inezayo.
Ubuye wakhuluma ngenqubo yokudala, ini kunzima futhi kuyakhungathekisa Lokho kungavela kwesinye isikhathi. Futhi siyazi ngalokhu. Kuthatha iminyaka eyi-10 ukudweba nokulolonga imicimbi, izindawo nezinhlamvu, okubeka etafuleni umuzwa ofuna ukuwudlulisa umfundi. Futhi ufuna ukwenza leyo ndaba ihlale ikhulelwe futhi uthathe, noma ucabangele unomphela, abalingiswa bayo njengabangane.
Manje kuthatha kuphela izinsuku ezimbalwa ukuthi abafundi bayiginye. Mina kwangithatha amasonto amabili, futhi ngoba bengilokhu nginezikhala zezikhathi zokufunda, ngakho-ke ebezifisela okuhle nokuhleleke kahle, kufanele uqhubeke u-yebo noma yebo ngokushesha nje lapho usuqala.
Kwenzeke kwababili abedlule, ngakho-ke bekungeke kanjani kufane manje? Futhi ukhohlwe? Khohlwa yilokho Imvula yeVigo, leso sikebhe esimpunga samafu nolwandle olunqunu, lezo umehluko phakathi kwedolobha nelasemakhaya? Khohlwa umusa, ubulula, ububele kanye nesizungu we-melancholic Leo Caldas? Ubuhle nothando luka ubaba wakhe? Kwabangabekezeleleki USantiago Losada? Ukuze ngempumelelo UClara Barcia? KuKhomishani Soto? Khohlwa yilokho isilwane sasendle nguRafa Estévez, ngubani zonke izinja emhlabeni ezizondayo futhi okungenakwenzeka ukuba zingamdumisi?
Cha, zonke lezo zinhlamvu ezilukwe futhi zakhonjiswa kahle kangaka azilibaleki. Njengoba i imlando nezinhlamvu kwesibili, kanye iziza ikhulelwe kahle futhi yalukelwa kahle izimo njengabaphikisi.
Izithombe: (c) U-Ediciones Siruela ku-Twitter.
Izingqikithi, abalingiswa, izinto zokuzilibazisa zombhali
UVillar wakuvuma lokho Ngangikhungathekile. Kepha yilokho okwenzekayo lapho izinto zenziwe kahle noma zithatha isikhathi esingakanani ukudala. Vele, esikubuze yena yilokho ungalindi eminye iminyaka eyi-10 ngokulandelayo inoveli. Impela sengivele ngifuna okuningi.
Uqhubeke nokuphawula nge isakhiwo esisha, abalingiswa nezindikimba yale noveli yesithathu: eziningi futhi ezihlukile ubudlelwane bomzali nengane, lo isizungu edolobheni elinabantu abaningi okuyinto, noma kunjalo, engakhonjiswa ingenalutho nge ukunganaki ngakwabanye njengabangenamakhaya nabangenamakhaya. Noma, endaweni esemaphandleni kakhulu, ukwenqatshwa nokwesaba ngakulabo okuthiwa ehlukile.
Ukhulume nangalabo izinto zokuzilibazisa imininingwane yomuntu yombhali ngamunye, njengaye funda ngokuzwakalayo lokho okubhalayo abalaleli abaningi abasondele noma abakhulu abanikeza umbono wabo noma abasiqondisayo noma bamane balalele. Futhi ephendula umbuzo wentatheli, uphawule wathi angakwazi bhala ngesiGalician nangeSpanishi, ikakhulukazi izingxoxo. Futhi uqhubeka kanjani epholisha futhi efaka ukuhumusha embhalweni wokugcina.
Futhi-ke wakhuluma ngalokho Amahlaya lokho futhi kumanoveli akhe. Lokho I-retranca yaseGalician ethi "baphonsa kithi lapho bezalwa" nokuthi kuyini lokho indlu brand. Ihlaya elikhanya ngokwengeziwe ngalokho counterpoint ngobuciko phakathi kwakho konke Izinhlamvu zesiGalician nalowo ongeyena: URafa U-Estevez.
Kwakuyi ngiyabonga ngobuqotho futhi ngijabule emndenini, kubangani, kubahleli nakubafundi ngalesi sikhathi sokulinda nokubekezela ngalo msebenzi onesizungu nowangaphakathi obhalayo. Ukubonga obekungukuthi mutual ngabahleli futhi, nakanjani, yibo bonke ababekhona.
Esikhathini esaziwa kakhulu inkampani Ngemuva kokuphothula lesi senzo, uVillar wasizela ngomusa ochithekile, kanye nowakhe "Ngiyabonga" ukuze ngincome, ngibabaze futhi ngibonge izindaba zabo ukuqeda ukuthinta kwenye yalezo zikhathi zemibhalo osuvele uzazisa ngezinsalela.
Noma ngubani owazi iVigo ngale kwezakhamuzi zayo uzokubona lokho umbhoshongo omkhulu wokuhlala eceleni eceleni kolwandle. Lapho i saxophonist, ngamehlo acacile agadlile futhi abiza ULuis Reigosa, avele wabulawa ngolunya olukhomba ebulelesi bentshisekelo. Kepha hhayi akukho lutho endaweni yobugebengu, akukho zinyathelo, akukho zimpawu zokulwa, noma yikuphi ubuhlobo bomuntu siqu obusolwayo.
Kule noveli yesibili vele kubanzi kakhulu sinokuthola kwe isidumbu sendoda ebhishi lasePanxón. Okwe- UJusto Castelo, a itilosi avele eboshwe izandla. Abekho ofakazi futhi akukho mkhondo yesikebhe sikamufi. Kuzoba uphenyo olunzima kakhulu ngoba wonke umuntu uthulisa izinsolo zakhe noma aziphambukise ezindleleni eziyinkimbinkimbi kakhulu.
Kule ndaba a ukujwayela ifilimu okuhle ngo-2015 lokho kubeka ubuso kuCaldas no-Estévez kulezo UCarmelo Gómez no-Antonio Garrido.
Ukunyamalala kwentombazanyana, UMonica Andrade, indodakazi kadokotela ohlinzayo owaziwayo futhi ohlala eTiran, eduze neMoaña, ubandakanyekile imfihlakalo Kusukela ekuqaleni. Ngisebenzile IVigo School of Arts and Crafts, wayengenasizathu esizwakalayo sokuhamba noma izitha ezaziwusongo. Noma mhlawumbe yebo.
La uphenyo olunzulu U-de Caldas y Estévez uthatha izinyathelo ezibonakala zilahlekile kumathuba ayizinkulungwane namalebula kuwo wonke umuntu njengabasolwa. Ngaphezu kwalokho, izimpilo zomuntu siqu kwamaphoyisa amabili bazoba nezinguquko eziningi ukuthi abafundi abaningi ngokuqinisekile sebeke babonga.
Ukuthi uma ungakayifundi okwamanje, kufanele uqale manje. Okwakhe ikhwalithi yezincwadi nokufundwa kwayo kwe-agile syntax enwetshiwe njengoba kucacile. Futhi kulabo izahluko ezimfushane futhi njalo kwethulwa ngophawu lwendlu: the izincazelo ezehlukene zegama yini ekuzo.
Kepha ngaphezu kwakho konke ngenxa yomthamo de ungene endaweni esondelene kakhulu kepha enenkungu futhi ngokuthinta imilingo engizihlanganisa naye njalo I-Galician terra. Futhi mayelana abalingiswa yebo, baba abangane nawe kusukela okokuqala uhlangana nabo, yalabo ohlale ucabanga ukuthi ngifisa sengathi ngabe bebekhona ngokoqobo ngobuqiniso bayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Literatura » Abalobi » UDomingo Villar. Isethulo eMadrid Sesikebhe Sokugcina. I-trilogy yakhe
Ukuxoxisana noRicardo Alía, elinye lamagama amakhulu enoveli yobugebengu yaseSpain.